Amaahda Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
Waa maxay Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed
Sideen u go'aamiyaa inta deyn ee aan qaadanayo?
Xagee ka heli kartaa Amaah Shaqsiyeed?
#2 Ururada Amaahda
#3 Shirkadaha Maaliyadda
#4 Goobta amaahda fac-wadaaga ah
#5 Bixiyaha amaahda internetka
#6 Gudbinta saaxiib ama xubin qoyska ka tirsan
#7 Amaah khaas ah oo laga helo maalgaliye
Maxaan ugu baahanahay Amaahda Maaliyadeed ee Shakhsi ahaaneed?
Maxaan ugu baahanahay amaah maaliyadeed oo shaqsiyeed?
Amaahda Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
#2. Ururka Credit PenFed
#3. Marcus waxaa qoray Goldman Sachs
#7. Ukunta Ugu Fiican
#8. Ugu dadaala
#9. Bangiga TD
#10. Bangiga Maraykanka
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
Inta badan, dadku waxay ku fikiraan inay bilaabaan ganacsi laakiin ma laha raasamaal. Waxaan arkay qof ku fikiraya fikrad cajiib ah oo ha dhinto maxaa yeelay ma jiraan wax lacag ah oo riyadaas lagu rumaynayo. Jiritaanka amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed ayaa maanta dunida laga dhaadhiciyay.
Amaahdu waxay dad badan siisay xorriyad ay ku riyoodaan mar kale. Waxay xaqiijineysaa in riyadaas aad leedahay la gaari karo. Amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed ayaa kaa caawin karta inaad ku bilowdo ganacsigaas si raaxo leh adiga oo ku siinaya lacag isku mid ah adiga, adiga oo bixinaya muddo go'an.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa waxa amaahda maaliyadeed shaqsiyeed tahay, sababta aad ugu baahan tahay 2021 iyo waxa amaahda maaliyadeed ee ugu wanaagsan 2021 ay yihiin. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doonto tan iftiiminaysa.
Amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed waa amaah kasta oo ay ku siin karto hay'ad dawladeed sida bangiga, iyo hay'ad gaar loo leeyahay sida ururka amaahda, amaahda internetka, iyo shirkadaha maaliyadda.
Waxay u baahan doontaa inaad haysato dammaanad si aad u bixiso inta ka horeysa iyo inaad awoodid inaad dib u bixiso lacagta waqti go'an.
Waqtiga intiisa badan, xitaa uma baahnid dammaanad si aad u qaadato deyn maaliyadeed oo shaqsiyeed. Parastatals -kaani waxay ku siinayaan deymahaas beddelkeeda, iyada oo ku saleysan mudnaantaada deynta.
Waxaad u qaadan kartaa deyn shakhsiyeed ujeedo kasta oo kugu habboon sida xoojinta deynta, biilasha caafimaadka lama filaanka ah, qalab cusub, fasax, ama xitaa deyn arday.
Adiga iyo shirkadu waxaad gaari doontaan heshiis ku saabsan muddada ay kugu qaadan doonto inaad dib u bixiso lacagtii lagu siiyay.
Lacagta waxaa laga qaadan karaa jeeggaaga, toddobaadle iyo marmar dhif ah, sannad walba. Dulsaarka aad bixiso waxaa lagu muujiyaa heerka boqolleyda sanadlaha ah (APR).
Celceliska APR ee amaah shaqsiyeedku waa 9.41% laga bilaabo Juun 2019, laakiin waxay u dhexayn kartaa 6% ilaa 36% taas oo ku xidhan mudnaantaada deynta, oo ay ku jirto baaritaanka dakhligaaga, deymaha, iyo dhibcaha dhibcaha. 12
Kahor intaadan qaadan deyn shaqsiyeed, hubso inay tahay waxaad rabto inaad sameyso. Xusuusnow marka aad deyn qaadato, waxaad la kulmi doontaa deyn aad muddo bixin lahayd. Hubi in amaahdan shaqsiyeed ay u qalanto.
Maskaxda ku hay in marka aad lacag amaahato, aadan dib u bixin dayntii hore; inta badan waxaa jira dulsaar ay tahay inaad shirkadda siiso oo ay la socoto bixinta raasamaalka aad qaadatay.
Ma jirto sabab aad dulsaar ugu bixisid lacagta aadan u baahnayn, markaa hubso inaad deyn qaadato oo kaliya sababtoo ah aad bay muhiim u tahay.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad go'aansato inaad amaahato, hubso inaadan deynin wax ka yar intaad u baahan tahay ama waxaa lagugu qasbi karaa inaad u leexato ilaha amaahda ee qaaliga ah daqiiqadda ugu dambeysa.
Akhri: Buugaagta Maaliyadda Shaqsiyeed ee Ugu Fiican Bilowga
Xagee ka heli kartaa Amaah Shakhsiyeed?
Waxaa jira ilo dhowr ah oo aad ka heli karto amaah shaqsiyeed. Ilahaas qaarkood waxaa ka mid ah-
Bangiyada waxaa maamula Kaydka Federaalka, Hay'adda Caymiska Debaajiga ee Federaalka (FDIC), Xafiiska Xisaabiyaha Lacagta (OCC), iyo Maamulka Ururka Deynta Qaranka (NCUA).
Waxay yihiin kuwa ugu sarreeya ee ku caan baxay bixinta amaahda dadka. Marka la barbardhigo xulashooyinka kale, bangiyada waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerar u qalmida deynta sare.
Ururka deynta, habsocodku uma adka sida isticmaalka bangiyada oo dulsaarka ururrada deyntu wuu ka hooseeyaa bangiyada. Hal dhinac oo hoos u dhac ku ah qaadashada amaahda ururka deymaha ayaa ah inaad xubin ka noqoto.
Haddii aadan xubin ka ahayn ururka amaahda oo aad deyn ku timaaddo, waxaa dhici karta in aan lagu siineyn.
Kuwanu waa shirkado iskood u samaystay ujeedo dhaqaale. Waxay caan ku yihiin inay deymaha ku bixiyaan qiime ka hooseeya xitaa bangiyada. Shirkad maaliyadeed oo gaar ah, dammaanad ayaa looga baahan yahay fulinta deymahaas.
Waxaa lagu siin doonaa waqti cayiman si aad u bixiso deymahaaga. Haddii aad sidaas samayn weydo waxay kuu horseedi doontaa in shirkadda maaliyaddu la wareegto dammaanaddaadii.
Waxaa jira dhowr goobood oo deyn-ka-dhigis ah oo maanta jira kuwaas oo aad si fudud ugu heli karto amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed. Aad bay u sahlan yihiin in la dhiso maadaama ay kaliya kaa doonayso inaad ogaato qof yaqaan qof.
Dunidu waa digital. Barnaamijyo badan iyo mareegaha maanta waxay leeyihiin dad diyaar u ah inay ku siiyaan deymo dulsaar aad u hooseeya. Soo hel oo ka faa'iidayso helitaanka amaahdaada maaliyadeed ee gaarka ah.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay qaraabo taajir ah ama saaxiib ama xitaa xubin qoyskaaga ka tirsan oo hodan ah aadna u doonaya inay ku siiyaan deyn aad ku maalgeliso meheraddaada ama waqti degdeg ah. Ha iloobin markaad fiirinayso dadka si aad uga hesho amaahdaada maaliyadeed ee gaarka ah.
Waxaad ka qayb geli kartaa aqoon isweydaarsiyo ama shirar waxaadna u soo bandhigi kartaa dadka fikradahaaga ganacsi. Markaad sidan samaynayso, qof ayaa laga yaabaa inuu jeclaado fikradda oo go'aansado inuu ku siiyo amaah maaliyadeed shaqsiyeed ganacsigaaga.
Si aad u aragto u-qalmitaanka deyn shaqsiyeed, deyn-bixiyahaagu wuxuu u ekaan doonaa jeeg si uu u arko-
Saamiga dakhliga iyo dakhliga
Iyada oo ku xidhan meesha aad ka qaadanayso amaahdaas, waxaa jiri kara shuruudo badan.
Waxaa jira dhowr sababood oo aad u go'aansan karto inaad qaadato deyn shaqsiyeed. Qaar ka mid ah waa-
Haddii aad leedahay kharashyo degdeg ah. Halkii aad qaadan lahayd deyn mushahar-dulsaar sare ah si aad u daboosho biilasha lama-filaanka ah, waxaa laga yaabaa inaad si dhaqso leh u hesho amaah shaqsiyeed maadaama ay bixiyeyaal badan bixiyeen lacago sida ugu dhaqsaha badan 24 saacadood.
Waxaad u baahan tahay inaad wax weyn iibsato sida qalabka.
Haddii aad u baahan tahay gargaar lacag caddaan ah oo degdeg ah
Haddii aad u baahan tahay lacag isla markiiba si aad u daboosho biilasha, kharashka degdegga ah ama wax kale oo u baahan daryeel degdeg ah, waxaad qaadan kartaa deyn shaqsiyeed.
Wax ka qabashada arrimaha degdegga ah sida- Bixinta lacagihii hore ee guriga iyo biilasha, biilasha caafimaadka, kharashaadka aaska, dayactirka baabuurka lama filaanka ah, waxaad tixgelin kartaa qaadashada deyn maaliyadeed oo shaqsiyeed.
Amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed waxaa loo isticmaali karaa qaab isku -darka deynta, gaar ahaan deynta kaarka deynta. Tani waa sababta oo ah waxay ka qaadaan dulsaarka hooseeya marka la barbar dhigo kaararka deynta, gaar ahaan haddii aad leedahay deyn wanaagsan.
Wax ka qabashada guriga muhiimka ah Hagaajinta iyo dayactirka. Haddii aadan diyaar u ahayn inaad halis ugu jirto inaad lumiso gurigaaga haddii ay dhacdo inaad dib u dhacdo lacag -bixinnada, waa inaad tixgelisaa inaad qaadato amaah maaliyadeed shaqsiyeed beddel ahaan
Kharashaadka Guuritaanka- Haddii aad ku dhowdahay meesha aad hadda ku nooshahay, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad daboosho kharash kasta oo weyn. Amaahda maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed ayaa kaa caawin karta inaad tan si wax ku ool ah u sameyso.
SocialFinance, Inc. waa shirkad maaliyadeed shaqsiyeed onlayn ah oo Mareykan ah. Adeegga mobilka-koowaad ee ku salaysan SanFrancisco.
SoFi waa adeeg maareyn maaliyadeed oo bixiya amaah, dib -u -maalgelinta, adeegyada maalgashiga, iyo wax ka badan macaamiisha. Waa caan iyada oo ay ugu wacan tahay kharash la'aan iyo ikhtiyaarrada dabacsan. Waa hab dijitaal ah oo si buuxda loo maareeyo lacagtaada.
Markaad u adeegsanayso SoFi deymahaaga maaliyadeed ee shaqsiyeed, waxaad marin u heli kartaa faa'iidooyin gaar ah oo loogu talagalay inay kaa caawiso sidii aad lacag ugu heli lahayd, bulshadaada, iyo xirfaddaada. Waxay leedahay shuruudo amaah debecsan adeegyada badidoodna wax lacag ah ma laha.
Waxaa lagu qiimeeyay #1 liiska deymaha maaliyadeed ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
PenFed Credit Union waxay bixisaa qiimeyo tartan ah oo amaah ah, VA Loans & HELOC, marka lagu daro deymaha baabuurta, ardayda, iyo kuwa gaarka ah.
Hadda waxaa jira in ka badan 2 milyan oo xubnood oo ka tirsan PenFed Credit Union oo leh hanti ka badan $ 25 bilyan. Xubnuhu waxay marin u leeyihiin in ka badan 50 laamood oo ku yaal Mareykanka oo dhan iyo saldhigyada milateri ee Guam, Japan, iyo Puerto Rico. PenFed Credit Union waxay ahaan jirtay mid ku kooban ciidanka iyo qof kasta oo xiriir la leh dowladda.
Si kastaba ha ahaatee, hadda waxay u furan tahay dhammaan muwaadiniinta. Waxaa lagu qiimeeyay #2 liiska deynta maaliyadeed ee shaqsiyeed ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
Goldman Sachs, oo ka mid ah magacyada ugu caansan Wall Street ee bangiyada maalgashiga, sannadka 2016 wuxuu ballaariyay bixinnadiisii ​​bangiga macaamilka ee Marcus by Goldman Sachs.
Marcus, oo ah bangi onlayn ah, wuxuu bixiyaa akoonno kaydsi oo wax-soo-saarkoodu sarreeyo, shahaadooyinka wax-soo-saarka sare ee deebaajiga (CD-yada), iyo amaah-shaqsiyeed aan lacag lahayn. Marcus wuxuu bixiyaa amaah shakhsiyeed oo aan la hubin ujeedooyin kala duwan.
Haddii aad rabto inaad xoojiso deynta, bixiso deymaha kaarka deynta ee dulsaarka dulsaarka, amaah u hesho mashaariicda hagaajinta guriga ama raac hadafyo kale oo maaliyadeed, Marcus wuxuu bixiyaa amaah shaqsi ah oo aan lacag lahayn oo ah $ 3,500 ilaa $ 40,000.
Waxaa lagu qiimeeyay #3 liiska deynta maaliyadeed ee shaqsiyeed ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
LightStream waa amaahiye online ah oo Mareykan ah kaas oo ah qeyb ka mid ah Bangiga Truist. Waa il dhaqaale oo loogu talagalay dadka leh amaahda wanaagsan ee bixisa amaahda ilaa $ 100,000 ujeeddo kasta.
Lacagaha waxaa si toos ah loogu shubaa akoonnada bangiga macmiilka, isla marka ay codsadaan, marka dhammaan tixgelinta la buuxiyo. LightStream ma laha wax khidmad ah amaahda shaqsiyeed waxayna bixisaa qiime aad u tartan badan.
Amaahdeeda waxaa loo isticmaali karaa ku dhawaad ​​wax kasta. Aad bay caan u tahay waxayna leeyihiin adeeg macmiil oo weyn.
Waxaa lagu qiimeeyay #4 liiska deynta maaliyadeed ee shaqsiyeed ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
Lacag-bixintu waxay siisaa amaah-shaqsiyeed heer-go'an ah amaah-bixiyeyaasha oo keliya ujeeddada bixinta deynta kaarka deynta.
Amaahda isku-darka waxay u rogtaa lacag-bixinnada kaarka deynta ee dulsaarka badan mid hal bille ah oo leh boqolkiiba boqolkiiba sannadle ah. Payoff ma bixiso lacag celin ama ujro daahsan.
Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu heli karo amaah shaqsiyeed. Isticmaalayaasha khibrada u leh iyaga ayaa had iyo jeer leh waxyaabo waaweyn oo ay sheegaan.
Waxaa lagu qiimeeyay #5 liiska deynta maaliyadeed ee shaqsiyeed ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
Upstart waxaa la aasaasay Abriil 2012 oo si cajiib ah u shaqeynaya, Upstart waa madal amaahda AI oo iskaashi la leh bangiyada iyo ururada deynta si ay u bixiyaan amaahda macaamiisha iyadoo la adeegsanayo doorsoomayaal aan dhaqan ahayn, sida waxbarashada iyo shaqada, si loo saadaaliyo u-qalmitaanka amaahda.
In kasta oo amaahda shaqsiyeed ee Upstart aysan la imaan astaamo aad u qurux badan, haddana waa ikhtiyaar dhaqso loogu maalgelinayo dadka amaahda leh ee leh dhibcaha dhibcaha oo hooseeya iyo kartida kasbashada ee xooggan.
Haddii aad raadineyso deyn shaqsiyeed oo dhakhso leh, waa inaad iska hubisaa Upstart.
Amaahda ukunta ugu fiican ee ukunta ayaa diyaar u ah kuwa wax amaahda ah ee doonaya inay isku daraan deynta oo sugaan amaah, laakiin waxay ka maqan yihiin astaamo gaar ah oo ay bixiyaan amaah -bixiyeyaal kale.
Waxay bixiyaan lacago badan oo amaah ah waxayna hubiyaan in ikhtiyaarka amaahdooda uu yahay mid sugan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad kaliya ka dooran kartaa laba ikhtiyaar oo dib u bixinta. Waa mid ka mid ah deymaha maaliyadeed ee ugu wanaagsan 2021.
Earnest waa tiknoolajiyad karti u leh fintech oo xarunteedu tahay San Francisco, California oo bixisa badeecooyin maalgelinta waxbarashada, oo ay ku jiraan dib-u-maalgelinta amaahda ardayga iyo amaahda ardayga ee gaarka ah.
Shirkaddu waxay qiimeysaa qofka waxbarasho buuxda, shaqo, iyo astaan ​​maaliyadeed, marka lagu daro dhibcaha dhibcaha (sidoo kale loo yaqaan dhibcaha FICO) si loo helo astaan ​​maaliyadeed oo dhammaystiran ee codsade kasta.
Waa mid ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee ugu wanaagsan ee ay tahay inaad ka fikirto qaadashada, gaar ahaan haddii aad tahay arday.
Deynta Shakhsi ahaaneed ee TD waa xal deyn debecsan oo aad u adeegsan karto inaad lacag ku amaahato hadaf gaar ah.
Waxaad isticmaali kartaa amaah si aad u maalgaliso mashruuc dayactir, aad wax weyn ku iibsato ama aad ku xoojiso deymaha dulsaarka badan.
Amaahda waxaa lagu heli karaa dulsaar go'an ama isbeddel leh waxayna la yimaadaan ikhtiyaarro dib -u -bixinta oo dabacsan si ay kaaga caawiyaan miisaaniyadda.
Waxay caan yihiin sababtoo ah waxay ujeedadoodu tahay inay ku siiyaan lacago dayn ah oo ku habboon miisaaniyaddaada.
Haddii aad tahay macaamil hubinaya Bangiga Mareykanka, waxaad deynsan kartaa ugu yaraan $ 1,000 illaa $ 50,000. Dhinaca kale, haddii aadan ahayn macmiil bangi, waxaad awoodi kartaa inaad amaahato ilaa $ 25,000.
Haddii la oggolaado, waxaad heli doontaa inaad bixiso lacag isku mid ah bil kasta muddo ah 12 illaa 60 bilood, oo leh xaddiga boqolkiiba sannadlaha ah (APR), oo u dhexeeya 5.99% ilaa 18.49% APR. Markaad qaadato deyn shaqsiyeed, ma bixin doontid khidmadaha asalka ah mana jiro ciqaab hore -u -bixin ah.
Qiimaha qarsoon iyo astaamaha dammaanad -qaadka ayaa ah waxa ka dhigaya deyn shaqsiyeed Bangiga Mareykanka mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo Amaahda Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan ee 2021
Ma qaadan karaa amaah maaliyadeed shaqsiyeed damaanad la'aan?
Haa Waad awoodaa Waxay ku xiran tahay meesha aad go'aansato inaad deynta ka qaadato.
Waa maxay shirkadda amaahda maaliyadeed ee ugu fiican?
SoFi waxaa lagu qiimeeyay kan ugu sarreeya shirkadaha amaahda maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Shirkadaha amaahda maaliyadeed ma xad dhaaf baa?
Maya. Waxay ku siiyaan lacagta aad rabto markaad u baahato.
Sidee bay shirkadda amaahda maaliyadeed ee shaqsiyadeed u heshaa raasumaal ay ku bixiso amaahda?
Waxay inta badan lacagta ka qaataan Kaydka Federaalka, ka dibna waxay ku siiyaan qiime sare.
Shirkadaha amaahda shaqsiyeed ma yihiin kuwo ku habboon?
Ma fiicna in aad wax amaah ah qaadato haba yaraatee, laakiin marka ay tahay in aad hubiso in ay ku jirto shirkad amaah ah oo maaliyadeed oo shakhsi ah.
Ma igula talin lahayd inaan u isticmaalo shirkad deyn gaar ah amaahdayda?
Haa Shirkadaha maaliyadeed ee shaqsiyeed ee la aqoonsan yahay waxay bixiyaan qiime wanaagsan deymahaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad go'aansatay inaad qaadato amaah shaqsiyeed oo aad raadinayso siyaabaha ugu fiican ee aad sidaas ku samayn karto.
Hubi in qaadashada amaahdani gabi ahaanba u qalanto maxaa yeelay in kasta oo ay u ekaan karto mid fudud marka hore, haddana had iyo jeer sidaas ma aha. Kuwani waa amaahda maaliyadeed ee ugu wanaagsan sannadka 2021.
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Amaahda PPP iyo maxay ka dhigan tahay? Waa maxay faa'iidooyinka…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Amaahda La Kabo
Tusmada Tusmada Qari MAXAY TAHAY buundada deymaha 1. Heer sare/gaar ah: 2. Aad u wanaagsan
Tusmada Tusmada Qari amaahda dib-u-maalgelinta ardyda. 5 Faa'iido & Faa'iido darrooyin ah ee Amaahda Ardayga Dib-u- Maalgelinta HABKA DHAQANKA EE CODSIGA ARDAYGA
Jadwalka Mawduucyada Qari WAA MAXAY DEYN GANACSI? 6 NOOCYADA CAN ee Deynta GANACSIGA IYO SIDA LOO CODSADO ...
Tusmada Tusmada Qari Amaahda Shakhsiyeed ee Bilowga Hore Astaamaha ugu Wanaagsan Maalgelinta maalinta xigta Taariikh deymeed looma baahna Ciqaabta Lacag Bixin Hore Looma Bilaabo Amaahda Shakhsiyeed Dib u Dhaca